Apps ကပ APK ကိုပေါ်ရရှိနိုင် Android အတွက် App များ Call & ဆက်သွယ်ရန်
ပင်မစာမျက်နှာ » ခေါ်ရန် & ဆက်သွယ်ရန် Apps ကပ
Category: - Apps ကပ Call & ဆက်သွယ်ရန်
ကစာသားသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပေးပို့ဖို့ကြွလာ, ဒါမှမဟုတ်ပင် Google Maps ကိုတခုတခုအပေါ်မှာလိပ်စာတက်ရှာဖွေနေတဲ့အခါမှာ, သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်အဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုရှိသင့်ပါတယ်။ ဤအအဆက်အသွယ်အချိန်အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင့်သူတို့ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနေကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အချိန်အများစုမှာ, မလိုအပ်သောထပ်တူများကိုဟောင်းနွမ်းနံပါတ်များနှင့်ခေါင်းစဉ်မသိလိပ်စာများကျွန်တော်တို့ရဲ့ default အအဆက်အသွယ် app ထဲမှာဖွင့်ပုံ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်အဆက်အသွယ်ရှာတွေ့မှပင်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မစိုးရိမ် Apps ကပ APK ကို အကောင်းဆုံးကိုအချို့စာရင်းဖြစ်ပါတယ် ခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရန် apps များ android ဖုန်းပါ။
ဤအ apps များနှင့်အတူသင်အလွယ်တကူအသက်ပျောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအဆက်အသွယ် delete ထပ်အဆက်အသွယ်ကိုဖယ်ရှားခြင်း, devices များနှင့် app များကိုဖြတ်ပြီးသောအပြောင်းအလဲပိတ်ပင်တားဆီးမှုမလိုချင်တဲ့အဆက်အသွယ်များနှင့် ပို. ပင်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအများအပြားအကောင့်ပတ်ပတ်လည် shared သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်-စာရင်းမလိုချင်ကြဘူးလျှင်, ငါတို့သည်ကိုအကောင်းဆုံးပြီ ခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အက်ပ်များ သင့်ရဲ့အဓိကအကောင့်အဖြစ်အစေခံနိုငျသော Android အတွက်။ ဤရွေ့ကား apps များအလွန်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်အခြားသူများနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များဝေမျှတာပါ။ တွင် Apps ကပ APK ကိုကျနော်တို့ဟာသင့်ရဲ့ privacy ကိုတန်ဖိုးထား။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ users ယုံကြည်စိတ်ချရထားတဲ့သူတို့သာ apps များစာရင်းပါပြီ။ သင်သည်သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တို့အတွက်အလွန်အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်း, ဤ app များအနက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်ပါကအဆက်အသွယ်များကိုဖုန်းအဟောင်းမှတင်သွင်းလိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Android ဖုန်းအဟောင်းမှအသစ်တစ်ခုသို့အဆင့်မြှင့်ပါကအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင့်တွင်ဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုရှိသောကြောင့်သင်၏အဆက်အသွယ်များကိုသင်၏အကောင့်မှတစ်ဆင့်သင်၏ဂူဂဲလ်အဆက်အသွယ်အက်ပ်တွင်အသာပုတ်။ လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်သည်။ Settings> Accounts & Passwords> Accounts Add> Google သို့သွားပါ။
ထပ်တူအဆက်အသွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်အမည်များစာရင်းပေါ်တက်ပုံအကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ ဤနည်းကိုသင်ထပ်တူအဆက်အသွယ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုပေမည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အစေခံရန်, သင်မလိုချင်တဲ့အဆက်အသွယ်ဖယ်ရှားပစ်ရကိုကူညီနိုငျသောနေရာလေးကို apps များအချို့ကိုရှာဖွေပေမည်။ တောင်မှပိုကောင်း, သင်တဦးတည်းထဲသို့ထပ်အဆက်အသွယ်များကိုပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အမည်များစာရင်းအပေါ်စုပြုံပြွတ်သိပ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အဆက်အသွယ်နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ပါရန်ရှိသည်သည့်အခါထိုကွောငျ့, သငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူကပြုကြလိမ့်မည်။
မလိုချင်တဲ့နှင့်နှောင့်အယှက်ခေါ်ဆိုသူများနှင့် telemarketers ဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ရန်အတွက်, သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်မိမိတို့၏နံပါတ်များကိုပိတ်ဆို့ဖို့လိုပေမည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အစေခံရန်, Apps ကပ APK ကို အရမ်းလုံခြုံပြီးလုံခြုံသော, Android အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခေါ်ဆိုခ blocker app များကိုပေးစွမ်းသည်။
Caller ID ကို apps များ
Android အတွက်ရရှိနိုင်ကွဲပြားခြားနားသော Caller ID ကို apps များလည်းရှိပါသည်။ ဤအ apps များနှင့်အတူသင်ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အဘယ်အရပ်ကသူထွက်တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုဥပမာတစ်ခုမှာ TrueCaller ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအ apps များနှင့်အတူ, သင်ခေါ်ဆိုသူ၏ junk သို့မဟုတ်စစ်မှန်သည်ဖြစ်စေအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းကိုသင်အလွယ်တကူသင်ခေါ်ဆိုခကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်သင့်ပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
အဟောင်းသည် Android Smartphone ကို default အားဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုမှတ်တမ်းတင်အင်္ဂါရပ်များမပါဘူးဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။ အနာဂတ်ကိုးကားစကားသံကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတင်များအတွက် apps များ download လုပ်ပါ။ ဤရွေ့ကား app များကိုတိကျသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြ၏။
ဖုန်းအစီအစဉ် - ခေါ်ဆိုမှု ...
Z ၏ခေါ်ဆိုသူအမည် ...
ဖုန်းခေါ်သူအမည်ကြေငြာသူ - လက် ...
tellows - ဖုန်းခေါ်သူ ID ...
blocker Call - Block ကို ...
Kashif - အကောင်းဆုံး Caller ...
Upcall - အမည်မသိ Caller ...
ViewCaller - Caller ID ကို ...
blocker Call - ခေါ်ဆိုမှုများ ...
ဓာတ်ပုံခေါ်ဆိုသူ၏မျက်နှာပြင် - HD ကို ...
စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ရန် - ရီးရဲလ် ...
SIM ကဒ်ဆက်သွယ်ရန် Manager ကို
အဘယ်သူသည်ငါ့ကို Calling ရဲ့ ...
ဆက်သွယ်ရန် Fixer ကို Duplicate နှင့် ...
Recorder မှာ Automatic, ခေါ်ရန် Call ...
Recorder ACR Call: စံချိန်တင် ...